Amakhasino amahle kakhulu eNeteller Wabadlali baseNingizimu Afrika!
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-inthanethi amukela i-neteller
Amakhasino E-Inthanethi Amukela i-Neteller
I-Neteller yindawo yokukhokha evumela abantu emhlabeni wonke ukuthi bakhokhe ngokushesha futhi kalula ngokusebenzisa ama-akhawunti abo asebhange noma amakhadi esikweletu ukufaka imali ku-ewallet. Olunye lwezinhlelo ezaziwa kakhulu ze-ewallet lapha, i-Neteller ikhula ngokuthandwa nsuku zonke futhi njengamanje inikeza amasevisi kubasebenzisi emazweni angu-200 emhlabeni jikelele kubandakanya neNingizimu Afrika. Kungani ithandwa kangaka? Kungenzeka ngoba lena yi-ewallet evumela abadlali ukuthi bakhokhe ngokuphepha futhi kalula, ngaphandle kokukhathazeka ngezigebengu ze-cyber ezintshontsha imininingwane yazo. Kungaba futhi ijubane lokukhokha nokukhipha imali, noma kungaba ubulula kakhulu bokuba nesikhwama esihamba nawe nomaphi lapho uya khona.
Lolu hlu lwamakhasino aseNingizimu Afrika amukela i-Neteller lukuvumela ukuthi uqalise manje. Wazame wonke bese ubona ukuthi kulula kangakanani ukusebenzisa i-Neteller ukwenza amadiphozithi akho nokukhipha imali yakho.Ukudlala ekhasino ye-Neteller kukuvumela ukuthi uzijabulise ngokunethezeka ngohlelo olunikeza ngaphezulu kokukhokha kuphela. Lunikeza ukuthula kwengqondo. Njengabadlali abaningi, mhlawumbe uzofuna ukusebenzisa uhlelo olukunika isivinini esithe xaxa, ukuphepha kanye nokusebenziseka kalula ngaphandle kwazo zonke izindleko ezengeziwe ezihambisanayo futhi ukukhetha i-Neteller nekhadi layo le-NET +, ubuchwepheshe obukhethekile bokuphepha, nokusebenziseka okuphelele, kukunikeza lokho.
Amakhasino E-Neteller Anconyelwe Abadlali baseNingizimu Afrika
Izinzuzo zokusebenzisa i-Neteller emakhasino e-inthanethi
Uma uzokwenza inkokhelo ekhasino ye-inthanethi, ngeke uswele izindlela eziningi zokusebenzisa. Ngakho-ke kungani ukhethe i-Neteller ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinhlelo ze-ewallet, ukudlulisa ngebhange, ikhadi le-debit noma lesikweletu? Ngamafuphi, i-Neteller ingenye yabahlinzeki bamasevisi ambalwa athi anesofthiwe esezingeni eliphakeme kakhulu yokuguqula idatha ekhona, kanye nokuphepha okuhlukile kwabasebenzisi bayo. Kunobungozi obuncane kakhulu bokukhwabanisa kwezezimali ku-inthanethi futhi kunengozi encane kakhulu yokuthi imininingwane yomuntu izovela emakhasino e-inthanethi.
Inzuzo yokungaziwa eceleni, i-Neteller ibuye ivumele abasebenzisi ukuthi badiphozithe imali nokuthi bayikhiphe kuma-akhawunti abo ngokushesha ngoba emhlabeni wamakhasino e-inthanethi, isivinini siyinto enkulu. Amakhasino amaningi akhuthaza abadlali ukuthi basebenzise i-Neteller futhi izobanika ibhonasi yokusebenzisa le ndlela yokukhokha, ikakhulukazi ngoba inezinzuzo eziningi.
Uma kuziwa ekukhipheni kwemali, uzojabula ukwazi ukuthi uma usebenzisa i-Neteller, ukukhipha kwakho kwemali kwenzeka ngokushesha futhi ungalisebenzisa ikhadi le-Neteller NET + ukuze ukukhiphe ukheshi ku-akhawunti yakho ye-Neteller kunoma iyiphi i-ATM emhlabeni. Ukwenza izinkokhelo ezisuka ku-akhawunti ye-Neteller kuya kwenye nakho kuyashesha, ngakho-ke uma ufuna ukusiza umngane ngezimali ukuze baqhubeke nokudlala, lokhu kuyashesha futhi kulula.
Ukusebenzisa uhlelo emakhasino amukela i-Neteller
Uma usuthathe isinqumo sekhasino uzodlala khona (futhi ungasebenzisa uhlu lwethu ngezansi ukuthatha isinqumo kulula), uzodinga ukuvula i-akhawunti ye-Neteller ukuze kufakwe imali yangempela ekhasino bese uqala ukudlala. Ukuze wenze lokhu, gcwalisa ifomu lokubhalisa le-Neteller ngemininingwane yakho siqu kanye neye-akhawunti. Ungakhathazeki mayelana nokufaka imininingwane yakho ku-inthanethi. I-Neteller uhlelo oluphephile.
Ngemuva kwalokho uzodinga ukudlulisa imali ku-akhawunti yakho ye-Neteller, ongakwenza kalula ku-inthanethu, futhi uvakashele ikhasino ye-inthanethi yakho. Uma usufikile kukhasi likakheshiya, khetha Neteller njengendlela yakho yokukhokha bese ulandela imiyalelo. Uzohanjiswa kwelinye ikhasi bese kudingeka ukuthi ungene ngemvume ukungena ku-Neteller ukuze wenze idiphozithi, inqubo eyengeza ukulondeka ohlelweni, kodwa uma usuqinisekise imali ufuna ukuyifaka, uzokwazi ukudlala ngemali yangempela ngokushesha.
Njengoba nje ikhadi lasebhange likuvumela ukuthi ukhiphe imali ku-akhawunti yakho yasebhange, ikhadi le-NET + likuvumela ukuthi ukhiphe imali ku-akhawunti yakho ye-Neteller. Njengamanje litholakala emazweni angaphezulu kwangu-100 nezinhlobo zemali eziyisishiyagalombili emhlabeni jikelele, azikho izindleko ezikhokhwa ngenyanga zokusebenzisa leli khadi futhi linikeza ukuphepha okufanayo nokusebenzisa i-Chip ne-PIN njengekhadi lasebhange lakho. Ungalisebenzisa futhi ikhadi le-NET + ukukhokhela ezitolo ezamukela i-MasterCard, ngakho-ke asikho isidingo sokukhipha ukheshi.
Ungakucabanga ukuphepha nokusebenziseka kalula lokhu okungangezela empilweni yakho? Esikhundleni sokusebenzisa i-akhawunti yakho yasebhange, ungazakhela isikhwama semali esincane e-Neteller, esixhaswe ngemali oyiwina ekhasino, bese usebenzisa ikhadi lakho le-NET + ezitolo ezakhiwe noma ku-inthanethi ukukhokha ngemali oyiwinile.